Iphaneli yeFlat esebenzayo
Iphaneli yeFlati esebenzayo
Isixhobo sePaneli yePhala engasebenziyo
Iscreen esingadibaniyo neSixhobo
Ibhodi esebenzisana nayo
IBhodi emhlophe esebenzayo
Konke kwiBhodi eNye yokuNxibelelana
Iimpawu zangaphakathi zedijithali
I-Wall Mount Digital Signage
K Uhlobo lweKhiyoski
Iposta X yohlobo lwePosta
Ingscreen Preprimary Series Interactive Flat Iphaneli D ...
Iphaneli yokuHlola yeHlabathi ye-Ingscreen edibeneyo ...
Ingscreen lenkomfa Series Interactive Flat Iphaneli D ...
Ingscreen 1080P Full HD Laser Ultra Mfutshane Phosa Proj ...
Ingscreen 4K Laser Ultra Mfutshane Phosa Projector For H ...
Uchungechunge lweMfundo ye-Ingscreen yokuDibana kwePaneli ePhambili
Uchungechunge lweMfundo ye-Ingscreen yeFlat yeFlat eboniswayo inesisombululo se-UHD esiyi-4K UHD, ngaxeshanye amanqaku angama-20 achukumisayo, iinkqubo ezimbini kubandakanya i-Android 8.0 kunye nenkqubo yewindows kunye nokwakha kwisoftware ekwabelwana ngayo. kwaye uvumele utitshala ukuba agcine ukufundisa ngokungaphantsi ngokuskena ikhowudi yeQR kuso nasiphi na isixhobo.
Iscreen sokuqala sePrimiyamu esiSebenzayo sePaneli yokuBonisa
Iscreen seprimary yamacandelo asebenzisanayo abonisa ipaneli ecwangcisiweyo yenzelwe ukwenza ukuba intlanganiso yakho isebenze ngakumbi. Ngonxibelelwano olunamanqaku angama-20 kunye nesoftware eyakhelweyo ngaphakathi kwiscreen sokubonisa imixholo yokwabelana ngesiqulatho, uthotho lokuqala lwe-Ingscreen luncedo ekuququzeleleni imiboniso, ukuqiqa kunye nokwenza izigqibo. Yonke into oyifunayo entlanganisweni idityaniswe ngaphandle komthungo kumboniso odibeneyo, vele ungene kwaye uqalise intlanganiso yakho.
Iscreen seNkomfa yeeNgcaciso eziHlanganisiweyo zePaneli yokuBonisa
Ingqungquthela yesikrini se-Ingscreen esibonisa ukusebenzisana kwePaneli yeFlat esine-4K UHD isisombululo, ngaxeshanye amanqaku angama-20 achukumisayo, yakha kwikhamera ye-HD kunye neMicrophone yeArray, iinkqubo ezimbini kubandakanya inkqubo ephezulu ye-Android kunye nenkqubo yewindows kunye nezikrini ezininzi ekwabelana ngesoftware ngaxeshanye. ukusebenzisana kwindawo kunye nezixhobo njengokuba zikwiofisi enye.
Ingscreen 1080P Full HD Laser Ultra Short Throw Projektha isebenzisa imithombo yokukhanya emsulwa ye-laser ngemvelaphi ye-1920 * 1080 isisombululo, ngaphezulu kweeyure ezingama-20000 ukusebenza ubomi.
Iprojektha ye-Ingscreen ye-4K ye-Ultra ePhosileyo yokuKhangela iKhaya leTheatre
Iprojektha ye-Ingscreen 4K Laser Ultra Short Throw ine-resolution ye-4K UHD yemveli, ukukhanya kwe-1500 ansi lumens, eyakhiwe kwi-android8.0 3GB RAM 64 GB memory, wifi, bluetooth etc high uqwalaselo lokuqinisekisa ukuba abasebenzisi bafumana elona thuba libukeleyo. yenza ikhaya lakho libe yindawo yabucala, yodidi oluphezulu lwebhanyabhanya, apho indawo elungileyo yexesha losapho, enobuchwephesha bokubonisa ubuchwephesha, ikhusela amehlo xa kuthelekiswa nokukhanya okuthe ngqo komdabu weTV. Ukukhanya Soure Laser Blue + Phosphor Ukuqaqamba 1900lm Displ ...
Iprojekti yokulahla ngokufutshane i-DLP
Itekhnoloji yokubonisa ye-DLP. Isisombululo se-1024 * se-768, inkxaso enkulu kwi-HD epheleleyo. Iiyure ezingama-6000 ukusebenza ubomi isibane UHP. Ubungakanani be-intshi engama-30-300 intshi. Isikrini sokuqikelela ubungakanani be-intshi ezingama-80 sidinga kuphela umgama wemitha enye. Ngezibuko le-HDMI. Iprojekhthi yeMveliso Iprojekhtha emfutshane IProjekhtha Uhlobo lweMveliso Iprojekthi yeProjekti ye-DLP Imveliso yombala oMhlophe Isisombululo soMthonyama 0.6 ″ XGA, 1024 × 768 DDP2431 Ukuqaqamba 4000ANSI LM umahluko weRatio 10000: 1 (Ukuvalwa okugcweleyo / okuGcweleyo) I-Aspect Ratio 16: 9/4: 3 Imibala Ebonakalayo 16.8 yezigidi, 24 -...
Iscreen seScreen sokuSebenza sokuChukumisa
Ingscreen Interactive Touch Isakhelo sisebenzisa ubuchwepheshe be-IR obuphambili, kunye nesakhelo esincinci, amanqaku angama-10 ukuya kuma-40 ngothinta ngaxeshanye, iplagi kunye nokudlala.Inkxaso yeewindows, iinkqubo ze-android njl. Ngokulula ukwenza ukubek 'esweni okuqhelekileyo kukuboniswa kokuchukumisa.
Ikhamera yamaXwebhu esongelayo ye-Ingscreen
Ikhamera yoXwebhu lwe-Ingscreen Wall Mount inoyilo oluhlanganisiweyo kunye neqokobhe lealuminium yokwenza kunye nokubonakala kwesitayile. Sebenzisa i-8 mega pixel lens ye-CMOS ukufezekisa ifoto ekumgangatho ophezulu kunye nevidiyo ukwenza umboniso ucace gca. Isenzi boluvo: SONY 1 / 3.2 ”Pixel: 8 mega Lens: F2.2 \_ 60 ° ukubonwa kwesisombululo Isiphumo: MJPG: 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 1920 * 1080 2048 * 15362592 * 1944 3264 * 2448 3000 * 4000 support Ifoto inkxaso） YUY2: 800 * 600 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 1920 * 1080 2048 * 1536 2592 * 194 ...
Ikhamera yoXwebhu yeScreen ephathekayo
Ikhamera yoXwebhu yeScreen ephathekayo yoXwebhu zii-5 mega pixels lens lens, with 22x times Optical zooming to get more detail photo / video. Isiseko sealuminiyam esinesitayile ngokulula usebenzisa indawo yokuhlangana kunye namaqhosha olawulo lokuchukumisa. Isilumko 5 mega pixel 、 2592 × 1944 @ 30fps 、 1/3 intshi CMOS Focus Auto Camera Rotation camera, inkxaso 180 degrees ujikelezo Ubungakanani ukuskena ubungakanani A3 Minimun scan umgama 15cm ...
Iipaneli ezili-100 zePhaneli yeMpumelelo kwiYunivesithi yaseQatar
Umnxeba: +86 19967412258
Idilesi: I-SHENZHEN: Umgangatho 2, iSakhiwo 1, iDaxinxinmei Industrial Park, indawo yaseZhenmei, iSitalato iXinhu, iSithili saseGuangming, iShenzhen
IHONGKONG: Igumbi le-1607, iZiko leTrend, i-29-31 iSitalato i-Cheung Lee, eChai Wan, eHong Kong
Ixabiso elibonisanayo lePaneli yokuBonisa, Iphaneli yeFlat esebenzayo, Iprojekti yeBhodi eSmart, Ixabiso lePaneli ePhambeneyo, Iphaneli efanelekileyo yeFlat efanelekileyo, Ukuboniswa kwePaneli yokuNxibelelana kwePaneli,